Top 10 Tsy maintsy manana fampiharana sary iPhone | Martech Zone
Sabotsy 17 Novambra 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tsy mpaka sary tsara aho ary ny fakana fakantsary matihanina dia mihoatra ny lohako, noho izany dia mamitaka kely aho amin'ny alàlan'ny fampiasana ny iPhone sy ny fampiharana tiako Avy amin'ny lafiny marketing, manome sary mivantana ny asa ataontsika, ny toerana tsidihinay ary ny fiainana iainanay dia mampitombo fangaraharana ankafizin'ny mpanjifanay sy ny mpanaraka azy.
Mba hifandraisana amin'ny vondrom-piarahamonina misy antsika, ny sary dia manan-danja. Ampirisihiko ny orinasa tsirairay hizara ny mpiasan'izy ireo! Ity misy fihenan'ny fampiharana iPhone tiako indrindra.
Eny, fantatro fa miaraka amin'ny iOS ny fakantsary fa mahatalanjona ny safidy haka sary panorama. Raha te haka sary panoramic dia kitiho ny bokotra options raha misokatra ny fakantsarinao. Ity dia sary nalaiko tamin'ny kaonseritra nandehanako vao tsy ela akory izay.
Tsy misy fampiharana sary hafa mahatonga azy ho tsotra kokoa hizara sary ara-tsosialy. Tiako ny afaka manosika sary mivantana any amin'ny Twitter, Facebook ary Foursquare mivantana avy amin'ny Instagram fa tsy mihaza sy mahita ireo sary miaraka amin'ireo fampiharana hafa. Ny fahaizana apetraka amin'ny sivana sy manjavozavo dia mety hahatonga anao ho pro!
Misy endri-javatra sasany izay tsy avelan'ny fakantsary fototra mahaliana, toy ny manampy timer ary maka sary. Ny Camera + dia manana fitaovana tsy mampino hanampy anao hanivana, hifantoka ary hanampy fahazavana amin'ireo sary alainao, ary koa ny fahaizana manitsy azy ireo. Izy io dia fitaovana fampiasa pro namboarina ho an'ny mpankafy!
Grid Lens dia mamela anao haka sary am-panangonana sy hametahana azy ireo amin'ny sary tokana. Azonao atao ny misafidy sy manamboatra layout, avy eo maka ny sary tsirairay avy amin'ny tsindrio eo an-toerana, ary avy eo tahiry, zarao na alefaso ny vokatra vita. Izany dia mahatonga ny fizarana fanangonana kely ho tsotra sy mora!
ColorSplash dia mamela anao hanala loko amin'ny ampahany amin'ny sary nalainao. Mora ny mampiasa ilay app - manitatra fotsiny ny sary dia sintomy ny rantsan-tànanao amin'izay tianao hamafana ny loko. Ny sary vita dia mety tena mahavariana - ity dia iray amin'ny zanako lahy sy ny sakaizany mandihy.
Efa nanana sary nangataka fanazavana ve ianao? Izany no atao hoe Over… manome kodiarana fitetezana tena milay mamela anao hanisy lohateny mahafinaritra ny sarinao ao anatin'ny minitra iray.
Snapseed dia manolotra sivana mahaliana sy fitaovana fanovana mahazatra ho an'ny sarinao. Mahavariana ny fanaraha-maso voafetra ary ny fahaiza-miasa dia manavao.
Blender dia manao izay lazainy… mamela ny fahaizana mampifangaro sary marobe. Ity misy fifangaroan'i Chicago… mitondra fiara mankeny amin'ny tanàna ka mijery ambany azy.
Natolotry ny Nat Finn, Tsy tsapako akory fa nanana rindranasa iOS ny Aviary. Ny mahatsikaiky dia hoe mankafy ny fampiharana iPhone tsara lavitra noho ny kinova an-tranonkala aho! Aviary dia manana fiasa taonina, nefa koa manana autocollant izay azo ampiasaina hanampiana callouts (na volombava) amin'ny sarinao.
Photoshop Express ho an'ny iPhone
Tolo-kevitra iray hafa avy amin'i Nat ary iray izay tokony nampidiriko… Photoshop Express. Ny fanitsiana matihanina azonao atao amin'ny Photoshop Express dia mety misy amin'ny sasany amin'ireo fitaovana etsy ambony, saingy mahatalanjona ny fampiasana azy mora. Manampia sivana, zana-kazo ary vokany mandritra ny fotoana kely kokoa ary manana efitrano fanovana sary mahafinaritra ianao.
Manana fampiharana iPhone hafa tianao ampiasaina ve ianao?
Tags: blenderfakan-tsary +colorplashmasom-byImagesaryiPhoneoversarypicturepotika
Ahoana ny fananganana ny marika an-tserasera
17 Novambra 2012 à 1:56
Aviary. Momba ny mpamorona meme daholo izany. Ary misy fitaovana manjavozavo sy retouching fa ny tena mahafinaritra momba azy dia misy syndication. Facebook, twitter, flicker… tamin'ny fotoana iray. Saika mangatsiatsiaka toy ny an'ny Instagram
Ankehitriny, ny voalohany amin'ireo mamela ahy hikambana amin'ny pejy Facebook doka google plus WINS!
17 Novambra 2012 à 2:09
Mamy! Tsy tsapako akory fa nanana app mobile ry zareo!
18 Novambra 2012 à 3:10
eny. tena tsara. Fampiharana nandoa vola, fa ho an'ny mpamorona meme sy ny fampidirana lahatsoratra dia tena sarobidy izany. Ary koa ny Photoshop Express sy InstaPicFrame izay tsara. Aviary no nanana ny fizarana tsara indrindra.
29 Desambra 2012 à 10:40
Zahao ny fampiharana iPhoneography vaovao, Hipsta Hipster Cam amin'ny http://www.hipster-camera.com Mihevitra izahay fa manana fikorontanana mahafinaritra amin'ny fampiharana sary iphone mahazatra amin'ny alàlan'ny fananana sivana tany am-boalohany tsy misy fetra izay noforonina an-tongotra.
Mar 11, 2013 ao amin'ny 1: PM PM
Heveriko fa hadinon'ny mpanoratra ny nampiditra 'Zitrr Camera'. Heveriko fa tsara lavitra noho ny fakan-tsary + na Instagram… koa, ny sasany amin'ireo fampiharana eto dia tsy dia tsara loatra :/
Apr 4, 2013 amin'ny 2: 49 AM
Fampiharana mahafinaritra! Saingy tokony hojerenao ihany koa ny Auto Colorize Pro
Jan 2, 2014 ao amin'ny 3: 05 AM
Instafusion Top iPad Photo-Edit Apps !!! Instafusion no fampiharana fanitsiana sary tsara indrindra sy fampiharana mahafinaritra hanitsiana sary amin'ny iPhone !!!
26 Feb 2014 tamin'ny 6:46 maraina
Ny tena tiako dia ny app instafusion
Apr 6, 2015 ao amin'ny 8: PM PM
Efa nahita Sweet Pix ve ianao! Tena hevitra mahafinaritra.